Dagaalka afka oo meel xun gaaray: Kangana walaasheed Rangoli waxay ku tilmaantay Alia iyo hooyadeed labo aan Hindi ahayn oo naceeb faafinayaan! – Filimside.net
Dagaalka afka oo meel xun gaaray: Kangana walaasheed Rangoli waxay ku tilmaantay Alia iyo hooyadeed labo aan Hindi ahayn oo naceeb faafinayaan!
Maalmo ka hor atirishada Kangana Ranaut ayaa weerar ku qaaday dhigeeda Alia Bhatt kuna tilmaantay cunug garab is qaraabeysi ku socoto sidoo kalena qalad tahay in doorkeedii filimka Manikarnika lala meel dhigo doorka Alia Bhatt ku matashay filimka Gully Boy madaama labadan filim sedexda bilood ugu horeesay sanadkan la daawaday.
Haddaba Alia Bhatt kiiska iskama waalin oo arinta wey qaboojisay waxayna sheegtay in Kangana ay ahayd isla qofkii amaantay doorkeedii filimka Raazi sidoo kalena wax dhib ah laheyn haddii doorkeeda filimka Gully Boy aysan ka helin dadaalkeeda sii wadan doonto.
Laakiin Kangana Ranaut walaasheed Rangoli Chandel oo sidoo kale Kangana dhanka Fashion-ka kala shaqeyso xoghayena u ah ayaa arinkan sii hurisay waxayna weerar toos ah ku qaaday Alia Bhatt iyo hooyadeed Soni Razdan oo aanba arinkan dhinac ka ahayn.
Rangoli Chandel waxay tiri “Alia iyo hooyadeed Soni waa labo aan Hindi ahayn oo dhalasho British ah heestaan kuna nool dhulkeena waxayna aflagaadeeyaand dadka iyo hantidooda waxayna been ka sheegaan sida ay bulshada Hindiya oo diimo kala duwan u wada dhaqmaan ayagoo xumaan faafiyaan dadkana isku diraan sidaa darteed waxaa la joogaa xiligii aan iska qaban laheyn madaama marna kuu dhoola cadeenayaan marna hoos kaa cunayaan.”
Alia Bhatt iyo hooyadeed Soni Razdan waxay heestaan dhalasho Ingiriis ah sidaa darteed ma coddeyn karaan doorashada guud ee Hindiya haatan ka socoto. Laakiin Soni Razdan oo atirisho ahaan jirtay waxay tiri “Dunidan casriga ah qof walbo halka uu doono ayuu ku noolaan karaa aabaheey waa Hindi anigoo sedex bilood jiro ayaan Ingiriiska tagay balse marka aan gudaha Hindiya kusoo laabtay ilaa maantadan xili walbo canshuur ayaan bixiyaa dalkana waxbaan soo galiyaa marka kuwa dhahayaan muwaadinka dhabta ah waa anaga aniga ayaaba ka wax soo saar badan.”
Waxaa Aqrisay 399